Ukududuzela kudlulile kwisigidi esinye sababhalisi boPhawu | iHorror
Ikhaya	Iindaba ezothusayo zoLonwabo	Ukududuzela kudlulile kwisigidi esinye sababhalisi
Ukududuzela kudlulile kwisigidi esinye sababhalisi
by Waylon Jordan Septemba 22, 2020
by Waylon Jordan Septemba 22, 2020 1,011 imbono
I-AMC's yonke into eyoyikisayo / evuselelayo yenkonzo yokusasaza, iShudder, ibhengeze ngale ntsasa ukuba bagqithile kumanqaku abarhumileyo abayi-1. Inkonzo ibisakha ngokuzinzileyo ubulungu bayo okoko yaqala ukubakho eluntwini ngo-2016, kodwa yabona ukunyuka okukhulu kunyaka ophelileyo kunye nokongezwa kwesilayidi sayo sokuqala.
"Ukongezwa kochungechunge lwangempela kunye neemovie zatshintsha ukukhula kwethu kwaye kwajika iShudder yaba yinkonzo ekufuneka yenziwe kuye nawuphina umntu onomdla kwinto eyoyikisayo, eyonwabisayo okanye yolonwabo olungaphaya kwendalo," uMiguel Penella, Umongameli we-AMC Networks SVOD wathi kwingxelo esiyifumene ngale ntsasa. “Ukugxininisa kwethu ngokungagungqiyo kwinkqubo esemgangathweni, umxholo omtsha kunye nokufumana abona baqulunqi bezona zilungileyo kuye kwenza ukuba uShudder avele kwilizwe elixineneyo leenkonzo zobhaliso. Impumelelo kaShudder iza njengoko ezinye iinkonzo ze-SVOD ekujoliswe kuzo-iAcorn TV, iSundance ngoku kunye ne-UMC- ziqhubeka nokukhula ngamandla kwababhalisi ngokukhula kwabalandeli abanomdla ngomxholo abawuthanda kakhulu. ”
Lo mxholo ubandakanya uthotho lwantlandlolo lwantlandlolo I-Creepshow, esekwe kwimovie yasekuqaleni kaGeorge A. Romero / Stephen King ukusukela ngo-1982 ngokunjalo nakulo nyaka host, Ifilimu ebhaliweyo, yadutyulwa, kwaye yakhutshwa kwiiveki nje ezili-12 ngexesha lokuvalelwa okwangoku okulinganiswe njenge- # 1 bhanyabhanya yonyaka kwiTamati ebolileyo.
UGiancarlo Esposito kwisiqendu sokuqala seShudder I-Creepshow
Ukongeza kwiinkqubo zabo zantlandlolo kunye nezikhethekileyo, baphinde bahlaziye islate yabo yeefilimu zeklasikhi kunye nehlelo rhoqo ngenyanga ukugcina iminikelo yabo intsha kunye nababhalisi babo bebuya ngakumbi.
Inkonzo yokusasaza ikwabhengeze ukwanda kwayo kwimimandla emitsha ngokunceda ukukhula kwayo. Ukuqala kwayo ukubakho, iShudder yayifumaneka kuphela e-US, Canada nase-UK kodwa ukusukela oko yasasazeka eJamani nasekuqaleni konyaka baye bafudukela eNew Zealand nase-Australia. Abasebenzisi banokubukela kwiwebhusayithi yabo, kodwa inkonzo ikwafumaneka kwiRoku, iTire TV, iApple TV, kunye neXBox kunye nokuba nezabo "iitshaneli" kwiapp yeApple TV nakwiAmazon Prime kwimimandla ethile.
Ngaba ungumbhalisi o-Shudder? Sixelele into oyithandayo ngayo kwizimvo!